Sacuudi Carabiya oo ku dhawaaqday in Taraawiixda lagu dukan doonin Masaajidda | HalQaran.com
Home Caalamka Sacuudi Carabiya oo ku dhawaaqday in Taraawiixda lagu dukan doonin Masaajidda
Sacuudi Carabiya oo ku dhawaaqday in Taraawiixda lagu dukan doonin Masaajidda
Sheekh Abdulaziz Aal-Sheikh
Riyad (Halqaran.com) – Muftiga dalka Sacuudi Carabiya ayaa sheegay in Salaadda taraawiixda iyo salaadda Ciidda lagu tukadaan guryaha, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Sacuudiga ee SPA.
Ku dhawaaqiddan ayaa ku soo beegmeysaa iyadoo muddo toddobaad ah ay naga xigtdo bisha barkaysan ee Ramadaan.
Muftiga Boqortooyada Sacuudiga Sheekh Abdulaziz Aal-Sheikh ayaa sheegay in Jameecada salaadda taraawiixda aanan misaajiddada lagu tukan doonin sannadkan sababo la xiriira tallaabooyinka ka hortagga faafidda Coronovurus.
Sheekh Abdulaziz al-Sheikh ayaa sidoo kale sheegay in haddii uu xanuunka sii socdo bisha barakeysan salaadda Ciidul-fitriga la tukan doonin.
Sacuudi Carabiya ayaa horay joojisay in gebi ahaanba salaaddaha jamaacada lagu tukado gudaha iyo bannaanka labada masjid ee barakaysan ee ku kala yaalla Maka iyo Madiina si loo yareeyo faafitaanka coronavirus.
Si kastaba, amarkan ayaa ka sii horreey amar ahaa inaan salaadda lagu tukanin dhammaan masaajidda kale ee dalkaasi Sacuudiga.